TrueReview: Na-anakọta Nyocha Mfe Na-eto Eto Azụmaahịa Gị 'Ngosipụta na Nzipụta | Martech Zone
TrueReview: Na-anakọta nyocha ngwa ngwa ma bulie azụmaahịa gị 'aha na nzipụta
Friday, February 26, 2021 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
N'ụtụtụ a, mụ na ndị ahịa nwere ọtụtụ ebe maka azụmaahịa ha. Ọ bụ ezie na ọhụhụ ha na-ahụ maka ọdịdị dị egwu maka saịtị ha, itinye ha na Google Mkpokọta map ngalaba dị mma.
Ọ bụ nuance na ọtụtụ azụmaahịa anaghị aghọtacha. Nsonaazụ njin nchọta mpaghara mpaghara nwere ngalaba atọ:
Searchkwụ ụgwọ Search - nke obere ederede na-ekwu Ad, gosipụtara, a na-ahụkarị mgbasa ozi ndị dị na elu nke ibe ahụ. A na-agwa ntụpọ ndị a na oge ma onye mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ site na pịa ma ọ bụ oku ekwentị.
Mkpokọta Maapụ - maapụ dị ịrịba ama bụ akụkụ dị oke mkpa nke ibe ahụ ma ha gosipụtara azụmaahịa, ọkwa ha, na ozi ndị ọzọ. Ekpebiri ọkwa na ngalaba a site na ọkwa azụmaahịa, nyocha, na ọrụ na ibipụta ya na peeji nke Google Business ha.
Search Organic - na ntọala peeji ahụ bụ nsonaazụ organic, njikọ nke ezigbo weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ndị edepụtara, na ogo nke ọma maka okwu nke onye ọrụ nyocha ahụ banyere.
Chị SERP Map Pack
Dị ka ị na-ahụ kọwara n’elu… aha ngalaba gị na aha ọma dabere na nyocha na ọrụ dị na peeji azụmaahịa Google gị dị iche. N'ezie, ị nwere ike ịnwe otu na-enweghị nke ọzọ (agbanyeghị na anaghị m akwado ya).
Ihe mere onye ahịa a ji eme nke ọma bụ na afọ ole na ole gara aga, ha tinyere usoro iji rịọ nyocha site n'ịntanetị site n'aka ndị ahịa ọ bụla ha mere. Dika ha malitere ichikota nyocha… ha malitere ihu otutu ndi ntinye aka site na igwe ihe nyocha.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eweta ọrụ mpaghara ma ọ bụ na-ere ahịa mkpọsa, nyocha dị oke mkpa maka mbọ ị na-agba n'ịntanetị. Ọbụghị naanị na nzaghachi dị mma iji meziwanye azụmahịa gị, ịkwado nyocha ndị pụtara ìhè ga-adọta ọtụtụ ndị ahịa. Ọ bụrụ n’inweghị ụzọ iji nakọta nyocha n’ụzọ dị mfe, ị kwesịrị ịdenye aha na ọrụ dịka Ezi nyocha.
Ezi mkpokọta Review Review
Ezi nyocha na-eme ka ọ dị mfe maka azụmaahịa ịrịọ nyocha maka weebụsaịtị ọ bụla, nata nzaghachi ndị ahịa ozugbo, ma melite nyocha ịntanetị. TrueReview na-enyere ndị azụmaahịa aka izipu SMS na nyocha Email ma ọ bụ arịrịọ nyocha, na-eme ka ọ dị mfe maka ndị ahịa ịnye nzaghachi. Kasị mma, ị nwere ike igbochi nyocha na-adịghị mma iji hụ na edozi nsogbu ahụ.
SMS arịrịọ - Zipu arịrịọ nyocha nke ahaziri ahaziri site na dashboard gị. Ndị ahịa gị ga-enweta njikọ omenala iji hapụ nyocha na weebụsaịtị ị kwupụtara.
Email Arịrịọ - Zipu arịrịọ nyocha nyocha ahaziri iche na ntaneti gị. Ndị ahịa gị ga-enweta njikọ omenala iji hapụ nyocha na weebụsaịtị ị kwupụtara.
Zipu arịrịọ dị ukwuu - Izipu nyocha nyocha otu otu na-ewe oge. Bubata kọntaktị gị site na CSV ma zipụ ọtụtụ narị nyocha nyocha ozugbo.
Drip mkpọsa - Nweta ihe si na nyocha gị nyocha site na akpaghị aka SMS na ozi Email. TrueReview na-eme ka ọ dị oke mfe ịmepụta mkpọsa akpaaka maka ndị ahịa gị.
Zere Nyocha Na-adịghị Mma - Obi ụtọ na ndị ahịa na-ahapụ nyocha na ndị na-enweghị afọ ojuju nwere ike inye nzaghachi ziri ezi, ma ọ bụ kpọtụrụ gị iji mee ka ihe dị mma. Ekwela ka ndị ahịa iwe were hapụ nyocha ọjọọ ma mebie aha gị n'ịntanetị!
Na-anakọta Nzaghachi - Gosi nyochaa weebụsaịtị gị ma ọ bụrụ na nsonaazụ nyocha ahụ dị mma, ma ọ bụ nye ụzọ dị ngwa maka ndị ahịa gị iji nye nzaghachi ziri ezi ma ọ bụrụ na nsonaazụ nyocha ahụ adịghị mma.
Saịtị Nyocha - Nyochaa saịtị ndị ahaziri ahazi gụnyere Google, Facebook, Yelp, Angie's List, Foursquare, Yellow Pages, Zillow, Compass, Realtor.com, Redfin, Amazon na ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na onye na-adịghị, ị nwere ike itinye a omenala review njikọ!
Lelee ma Zaghachi - Na TrueReview, ị nwere ike ịlele ma zaghachi nyocha gị niile na etiti ha.
Mmekọrịta - Jikọọ software CRM kachasị amasị gị iji zigara ndị ahịa gị arịrịọ na akpaghị aka, ma ọ bụ mepụta kọntaktị ọhụrụ na ibe kọntaktị gị mgbe ọ bụla ị rụchara ọrụ, mechie tiketi, kwụọ ụgwọ maka ọrụ, na ọtụtụ ndị ọzọ! Mmekọrịta gụnyere GoCanvas, Nhọpụta Setmore, Ndị ana-akpọ Google, Housecall Pro, Square, Jobber, Webmasters Real, ServiceTitan, Mailchimp, Google Sheets, Hubspot, Acuity Scheduling, LionDesk na ndị ọzọ.
Bido Ọnwụnwa 14 n'efu
Ngosi: Abụ m mmekọ maka Ezi nyocha na iji njikọ njikọta m na ederede ahụ.
Tags: Oge Acuitynnukwu nyochaa arịrịọna-anakọta nyochanzaghachi ndị ahịanyocha emailGoCanvasNdi ana-akpo GoogleOkwute GoogleỤlọ ụlọ ProokpokoroOnye ọrụOdumegwu Ojukwumailchimpmkpọ mapnyocha ndị na-adịghị mmaNyocha banyere ntanetịEzigbo ụlọ WebmastersNyochaServicelọ ọrụOge akara akasms nyochasquarenyochatruereview
Etu esi dee na nyocha Regex nzacha maka nchịkọta Google (yana ihe atụ)